အချစ်​+ရသ – PoPinVdo
October 12, 2018 Funny Popinအချစ်​+ရသNo Comment on အသက်အရွယ်ကြောင့်ထင်တယ် ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာထက် ဘယ်လောက် နားလည်ပေးမလဲ ဆိုတာကို ပိုတွေးတတ်လာတယ်။
အသက် အရွယ်ကြောင့်ထင်တယ် ဘယ်လောက်ချစ်လဲ ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် နားလည်ပေးမလဲ ဆိုတာကို ပိုတွေးတတ်လာတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်ထင်တယ် တဖက်က ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာထက် ကိုယ့်မှာ ဘယ်လောက်ရှိပြီး ကိုယ်ဘာပေးနိုင်မလဲပဲ ပြန်မေးတတ်လာတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်ထင်တယ် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်၊…
October 10, 2018 Funny Popinအချစ်​+ရသNo Comment on ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်ကိုလဲ မယူနိုင်ပါဘူး အတူတူမတောင်းစားနိုင်လို့ပါ
သိပ်ချမ်းသာလွန်း တဲ့ ခရိုနီတွေ လဲ မယူနိုင်ပါဘူး မယားကြီးဘွဲ့မခံယူလို့ပါ ထမင်းရည်လဲတူတူမသောက်နိုင်ပါဘူး ကျွန်မကအစားမက်လို့ပါ ဒါပေမယ့် ဟင်းတွေမျိုးစုံနဲ့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ကျန်နဲ့ ယောကျာ်းက ပြန်လာတစ်ရက် မပြန်လာတစ်ရက်လဲ မနေနိုင်ပါဘူး တဲအိုပျက်မှာလဲမနေနိုင်ဘူး ကျွန်မက ချမ်းတတ်လို့ပါ အိမ်အကြီးကြီးနဲ့လဲ…
October 10, 2018 Funny Popinအချစ်​+ရသNo Comment on ​ယောက်ျား​တွေက ချစ်​တယ်​လို့ စ​ပြော​ပေမဲ့ အ​ပြောခံရတဲ့ မိန်းမ​တွေကပဲ တသက်​လုံး ဆက်​ချစ်​ကြရတယ်​
ယောက်ျား ဆိုတာ သူတို့စိတ်​​ပျော်​ရာ အရပ်​မှာ​သာနေကြပြီး မိန်းမဆိုတဲ့အမျိုးကသင့်​​တော်​ရာ အရပ်​မှာ​နေကြရတယ်​… ​ယောက်ျားဆိုတာ ဆန္ဒကို​ ရှေ့တန်းတင်​တတ်​ကြ​ပေမယ့် မိန်းမဆိုတာ ဘ၀ကို​ရှေ့တန်းတင်​တယ်​…. ​ယောက်ျားဆိုတာကတိတစ်​လုံး လွယ်​လွယ်​​ပေးတတ်​ကြ​ပြီး မတည်​တတ်​ကြ​ပေမဲ့ မိန်းမဆိုတာက ရထားတဲ့ ကတိတစ်​လုံးကို အချိန်​တိုင်းတန်ဘိုးထား​ ​မျှော်​လင့်​​နေတတ်​တယ်…. ​ယောက်ျား​တွေက…
အချစ်ဆုံး ချစ်ခင်ပွန်း ဖတ်ကြည့်ပေးပါ
October 10, 2018 Funny Popinအချစ်​+ရသNo Comment on အချစ်ဆုံး ချစ်ခင်ပွန်း ဖတ်ကြည့်ပေးပါ
မိသားစု အတွက်အပြုံး မိန်းမ ရော့မင်းကြိုက်တာဝယ်ကြိုက်တာသုံးဆိုတဲ့၊စကားထက်မိန်းမ အပြင်အတူသွားကြမယ်လေပြင်ဆင်လိုက်၊ ဘာလိုချင်လည်း လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့၊ စကား အသုံးပြုမှုလေးကပိုနွေးထွေးကျေနပ်စေရတာပါ။ မိန်းမ စားနှင့်ကွာ ဝမ်းမှမဆုံတာဆိုတဲ့၊ စကားထက် မိန်းမခဏတော့စောင့်ပေးနော်၊ ဗိုက်ဆာပေမယ့်အလုပ်မပီးသေးလို့ပါဆိုတဲ့၊စကားအသွားအလာလေးကပိုစိတ်ကျေနပ်စေရတာပါ။ အချစ်ဆုံး ချစ်ခင်ပွန်း ဖတ်ကြည့်ပေးပါ3မိန်းမ…
သင့်ချစ်သူဖြစ်နေရင်တောင် ဒါမျိုးလာလုပ်ရင် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းလို့ ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ်
October 6, 2018 Funny Popinအချစ်​+ရသNo Comment on သင့်ချစ်သူဖြစ်နေရင်တောင် ဒါမျိုးလာလုပ်ရင် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းလို့ ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ်
ချစ်သူစုံတွဲတွေ အပါအဝင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် ဖြစ်စေ ဘယ်လိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုး မဆို ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရည်းစားပဲ ဖြစ်နေပါစေ ခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေထဲက တစ်ခုခု လာလုပ်ရင်တော့ ဥပဒေနဲ့…
မိန်းကလေး တွေ ဒဲ့ကြွေတဲ့ အချက်လေးများ
September 26, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​လူမှုဘ၀ / အချစ်​+ရသNo Comment on မိန်းကလေး တွေ ဒဲ့ကြွေတဲ့ အချက်လေးများ
September 22, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​IT နည်းပညာ ဗဟုသုတ / ဗဟုသုတ / လူမှုဘ၀ / အချစ်​+ရသNo Comment on Facebook ရဲ့ ရည်းစားရှာဖွေတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးနိုင်ပြီ
ကျွန်မစိတ်ကောက်ပြီး ရစ်တယ်ဆိုတာ ရှင့်ကို တကယ်ချစ်လို့ပါ
September 21, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​အချစ်​+ရသNo Comment on ကျွန်မစိတ်ကောက်ပြီး ရစ်တယ်ဆိုတာ ရှင့်ကို တကယ်ချစ်လို့ပါ
အရမ်းချစ်ခဲ့ပေမယ့် ရက်စက်သွားတဲ့သူကို အပြီးအပိုင် မေ့ဖျောက်နည်း
September 16, 2018 September 16, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)အချစ်​+ရသNo Comment on အရမ်းချစ်ခဲ့ပေမယ့် ရက်စက်သွားတဲ့သူကို အပြီးအပိုင် မေ့ဖျောက်နည်း
လောကမှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်ရတယ်ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။ အချစ်ရေးတစ်ခု အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာ ပိုချစ်တဲ့သူက ပိုနာကျင်ရစမြဲပါပဲ။ ကိုယ့်ဖက်က ဘယ်လောက်ပဲချစ်ခဲ့၊ ပေးဆပ်ခဲ့ပါစေ ကိုယ်အသည်းကိုခွဲပြီး၊ ကိုယ့်အပေါ်ကို ရက်စက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်း ကြုံရမှာပါ။ ဒီလိုကြုံလာရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ဖို့၊ ကိုယ့်ဘဝကိုအနစ်မွန်းခံဖို့ထက်စာရင် သူ့ကိုဘဝထဲကထုတ်လိုက်တာ…